Avenue, A Murwab Hotel ayaa ku guuleystay Qatar's Best 5 Star Business Hotel at International Travel Awards
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Avenue, A Murwab Hotel ayaa ku guuleystay Qatar's Best 5 Star Business Hotel at International Travel Awards
Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Ogeysiisyada Saxaafadda • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
JIDKA, Hoteel MURWAB, GOOBTA QARSOON EE DOHA
Abaalmarinta Safarka Caalamiga ah
Avenue, A Murwab Hotel wuxuu safka hore kaga jiraa hoy casri ah oo casri ah oo leh iskudhaf casri ah ee waxyaabaha ugu waaweyn nolosha.
Waa silsilad maxalli ah oo ka socota Murwab Hotel Group, qaybta howlgalka ee Isbitaalka Katara. Dhisme ka kooban 7 dabaq oo leh naqshad casri ah oo casri ah. Waxay noqon kartaa hantida ugu yar ee kooxaha Hotelka Murwab oo leh 170 qol, laakiin hudheelkan waxaa ka buuxa waxyaabo lala yaabo. Huteelka ayaa la furay 2016, oo ku cusub suuqa martigelinta maxalliga ah laakiin horay ayuu u hogaaminayaa tartanka. Mid ka mid ah xooggeeda muhiimka ahi waa meesha ay ku taallo. oo ku taal Al Sadd waana marin loo heli karaa dhammaan jidadka waaweyn iyo meelaha dalxiis ee ugu sarreeya iyo ganacsiga. Sidoo kale waxay u dhowdahay afar garoon oo koobka adduunka 2022 ah.
Avenue, A Murwab Hotel wuxuu si isdaba joog ah u bixinaayey adeeg huteel oo heer sare ah oo had iyo jeer laga helo aqoonsiyo laga helo goobo safar oo kala duwan sida TripAdvisor, Booking.com iyo Agoda. Hoteelku sidoo kale waa mid ka mid ah hantida loo bixiyay Qatar ee la siiyay abaalmarino badan oo leh 4 abaal marinood oo hoostiisa ah, kuwaas oo kala ah: TripAdvisor's Abaalmarinta Xulashada Socdaalka 2020, Agoda's Abaalmarinta dib u eegista macaamiisha 2020, Abaal marintii ugu dambeysay, Boos. Com's Abaalmarinta Dib-u-eegista Socdaalka 2021 iyo kuwa ugu caansan dhammaantood, Avenue, A Murwab Hotel ayaa lagu abaalmariyey Hoteelka ugu wanaagsan ee 5 Star Business Qatar for 2020 ka Abaalmarinta Safarka Caalamiga ah. U hibeynta Avenue ee bixinta adeegga macaamiisha ugu fiican ayaa ka muuqatay dib u eegista ay sameeyeen martidooda. Caddaynta in qiimayaasheeda asaasiga ah ee bixinta adeegga martigelinta heer caalami ay ku jirto DNA-kooda.
Maaddaama Qatar u aragto hoos u dhac taariikhi ah oo ku yimid iibka Hoteellada aafada darteed, Avenue, A Murwab Hotel wuxuu had iyo jeer leeyahay khiyaanooyin gacmahiisa. Iyada oo qorshooyin deg deg ah oo muhiim ah. Avenue, Murwab Hotel wuxuu sii wadaa inuu dakhli soo saaro. Sidoo kale, mahadnaqa kalsoonida macaamiishooda iyo martida joogtada ah, The Avenue, Murwab Hotel wuxuu ka badbaaday xilligii masiibada ayada oo aan albaabada loo laaban. Waxay u furan tahay qof walba si uu u siiyo raaxo iyo badbaado martidiisa. Sida uu soo xigtay mid ka mid ah martidooda, "Avenue waa gurigeyga oo ka baxsan guriga." Intaa waxaa sii dheer, waxyaabaha raaxada leh ee Huteelka ayaa soo jiita qoysaska joogitaanka, sidaas darteed waxay si joogto ah u soo saartaa dakhli iyo dib u eegis wanaagsan. Intii lagu gudajiray aafada, hadalka afka ayaa ahaa agabkii ugu xooganaa ee suuq geynta Hoteelka. Dib u eegisteeda wanaagsan iyo talooyinka ka imanaya martidii hore waxay soo jiitaan dad badan oo soo booqda.
Avenue, Hotel A Murwab wuxuu ka mid ahaa hoteeladii ugu horreeyay ee shahaado laga helo Barnaamijka Nadiifi Qatar. Laga soo bilaabo tayada alaabada fayadhowrka ee loo isticmaalo baaritaanka caafimaadka iyo amniga ee la sameeyo laga bilaabo xilliga martida ay ku soo galaan hudheelka. Dhammaan tallaabooyinka uu qaaday The Avenue Hotel waxaa oggolaaday dowladda. Avenue wuxuu tixgeliyaa caafimaadka iyo badbaadada qof walba. Hubinta in qof kasta oo soo galaya uu yahay mid raaxo leh oo aan wax u dhimayn amnigiisa iyo caafimaadkiisa.
Avenue, A Murwab Hotel ayaa si layaableh u bixiya adeegyo kala duwan oo dhammaantood hal saqaf ah oo martida guriga ku raaxeysan karaan. Ku buuxi barkadda, jimicsiga, hudheellada, 5 goobo cunto iyo cabitaan, dukaan tafaariiqda, 24-saac dukaan ku habboon, xarun ganacsi, xitaa ragga iyo dumarka saloon. Ka dhigista hudheel caan ah kaligiis maahan laakiin sidoo kale macaamiisha xarumaha kala duwan ee ku dhex yaal Hoteelka. Wadada, A Murwab Hotel waxaa laga yaabaa inay yartahay cabirkeeda laakiin waxaa ka buuxa dhamaan baahiyaha martida.
Iyadoo Qatar ay isu diyaarineyso FIFA World Cup 2022, The Avenue Hotel wuxuu gacmaha isula jiraa oo la shaqeynayaa dowladda Qatar isagoo u hoggaansamaya shuruudaha adag ee ay ka baahan tahay. Hoteelka oo dhan ayaa sidoo kale isku diyaarinaya dhinac walba iyagoo adeegsanaya heerka ugu sarreeya ee adeegga si loo muujiyo adduunka in Qatar ay tahay mid ka mid ah waddamada ugu horreeya markay tahay adeegga martigelinta. Avenue, Maamulaha Guud ee Hotelka A Murwab, Mudane Shadi Kassem ayaa gacmaha la isula tagay si loo hubiyo in wax walba ay yaalliin diyaarinta dhacdada aadka loo wada sugayo.
Mar alla markii wax walba la caadiyeeyo, Huteelka Avenue waxa uu rajaynayaa macaamiil badan oo shirkado ah oo ka socda suuqyada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba maadaama hudheelka hudheelku sii kordhayo.
Huteelkan guryaha lagu kobciyo wuxuu hadda la tartamayaa silsilado waaweyn oo hudheello caalami ah oo si la yaab leh ugu guuleystay tartankii suuqa maxalliga ah Waxaa la filayaa in maalin maalmaha ka mid ah, sumaddan maxalliga ahi ay noqon doonto silsilad caalami ah iyada oo ay ugu wacan tahay waxqabadkeeda iyo go'aaminta ay ku fiicantahay.
Si aad wax badan uga ogaato waddada, Huteelka Murwab fadlan booqo www.avenuedoha.com
Kuuriyada Koofureed waxay noqon doontaa seddexaad ee ugu weyn ee ka baxsan Aasiya ...